Siyakhula isikhalo izakhamuzi ngomgwaqo oLundi – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Siyakhula isikhalo izakhamuzi ngomgwaqo oLundi
Siyakhula isikhalo izakhamuzi ngomgwaqo oLundi
Ubukhosi News January 25, 2018
UMPHAKATHI wasoLundi ubhekene nengwadla yokugqoza kokulethwa kwezidingo zomphakathi okuwukuthuthukiswa kwezindawo zokuhlala, inkinga yokungalungiswa kwemigwaqo edolobheni kanye nasemalokishini akhelene nedolobha.
Indaba enkulu umphakathi okhala ngayo imigodigodi egcwele emigwaqeni esemalokishini okubalwa kwa-A Section, C no D-Section. Abashayeli bakhala ngokuthi imigodi emigwaqeni ilimaza izimoto, idale nezingozi.
ElaboHlanga lithole ukuthi lesi simo sokungalungiswa kwemigwaqo sesingaphezu kweminyaka emithathu. Amalungu omphakathi athi udaba aseluhambisile emkhandlwini wasoLundi.
Elokishini laseB-North nokuyindawo ethathwa ngokuthi iyona ephucuzekile, okukhona nezindawo zokulala eziletha umnotho nakhona isimo sibi kakhulu kwezemigwaqo.
Ilungu lomphakathi elihlala khona eB-North libikele iBAYEDE ukuthi kwaqhuma ipayipi lamanzi kule ndawo elinqamula emgwaqeni. Ibalelwa eminyakeni engaphezu kwemibili iminyaka kwenzeka lokho.
Leli lungu lo mphakathi liqhuba lithi liyalungiswa lilungiswe kungapheli nesikhathi esingakanani liphinde liqhume futhi nokwenz’umgwaqo ugcine umagendugendu. “Lokhu kusithwalisa kanzima njengabahlali balapha ngoba uma ugujwa lo mgwaqo kuvuleka umgodi kungabe kusahambeka kahle. Kugcina sekwenza izivakashi zingabe zisafuna ukuzolala ezindaweni ezikhona lana ngoba kuvele kuphele amanzi, kanti nomgwaqo awumuhle neze,” kuchaza leli lungu lo mphakathi elingathandanga ukudalulwa.
Ngenkathi elaboHlanga lihambela la malokishi lifike lazibonela le migodi egcwele umgwaqo ikakhulukazi kwa-D. Elinye ilungu lomphakathi elikhathazekile lithe: “Ziningi izingqinamba esibhekene nazo. Kubuhlungu ukulinyalelwa yimoto yakho ingena ishayise kabuhlungu esikhinsini. Lokhu kudla kakhulu kithi ngoba siqhunyelwa amasondo ezimoto, kuqhashe amabhawodi kukhahlazeke nezimoto zethu, uma usuyoyilungisa kutholakale ukuthi kuningi okonakele. Sifisa uMkhandlu wasoLundi usilalele uma sikhala,” usho kanje.
Edolobheni kunzima kakhulu khona njengoba nokuyindawo okufikela kuyo izivakashi, ikakhulukazi lapho okukhona khona izitolo ne renke yamatekisi endala. Okunye okuyinkinga enkulu kuleli dolobha inhlanzeko yalo. Kusolakala uMkhandlu ngokuthatha izinqumo sokuvumela izitolo endaweni engakulungele ukuthi ingaba nezitolo zalolu hlobo.
Lokhu kwenza kungene amathilagi amade avimbe umgwaqo kuphazamiseke nokuhamba kwezimoto maphakathi nedolobha. Uma lamathilagi ezokwethula impahla anomthela ekulimazeni umgwaqo bese kwanda nezinga lokungcola kwedolobha njengoba lezi zitolo zingenayo indawo ehlelekile yokulahla imfucuza bese kubhuza izimpukane.
ElaboHlanga lizamile ukuxhumana neMeya kaMasipala wasoLundi uMnu uWilson Ntshangase wathi usemhlanganweni.
Ikhansela leWadi 12 uMnu uThokozani Mkhize liphawule lathi, “Iqiniso lithi le nkinga yalo mgwaqo okukhulunywa ngawo (Izinyosi Street) oseB North kwaqhuma ipayipi lamanzi ngaphansi kwawo, uMkhandlu waseZululand District ngawubikela mina ngalolu daba emuva kokuthi ubaba uMfu uMbatha esengibikele ngahamba ngayowubona. Ngikholwa ukuthi iZDM ibe isuguma ngenhloso yokulungisa leli payipi nokuthe uma kuna imvula kakhulu izolo (ngoLwesithathu) kwase kuguguleka. UMasipala wasoLundi ubungakafi ukuzolungisa noma ukuzophesha lo mgwaqo. UMkhandlu unazo izinhlelo zokulungiswa kwemigwaqo emalokishini ehamba ngokwezigaba zayo.”
Isizwe sakwaNtuli siyingxabo yaMabhele kaMhlaphahlapha